Waa-waantii laga dhex waday Rooble & midowga musharraxiinta oo guul dareysatay – MANABOLYO NEWS
Warar lagu kalsoonaan karo oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay guul dareysteen dadaallo lagu doonayo in lagu dhex-dhexaadyo ra’iisul wasaaraha xilka siiyaha Maxamed Xuseen Rooble iyo musharaxiinta mucaaradka.
Sida ay ogaata Caasimada Online musharaxiinta mucaaradka ayaa dalbaday marka hore in xukuumadda ay raallo-gelin buuxda ka bixso wixii dhacay 19 Febraayo, taas oo uu ganafka ku dhuftay ra’iisul wasaaraha xilka sii haya ee Mudane Maxamed Xuseen Roobe.
Sidoo kale xukuumadda ayaa dhankeeda dalbaday in la joojiyo dibad-baxyada ay baabulayaan mucaaradka, islamarkaana la qaboojiyo xaaladda, balse waxaa shuruudaasi iyana ka biyo diiday xubnaha midowga musharraxiinta ee mucaaradka ku ah dowladda.
Xaaladda Muqdisho ayaa aad u kacsan, waxaana laga dareemayaa dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwa ciidan oo iska soo horjeeda.
Prof Warfaa'' Ugaas Xassan wuxuu u dhintay cudurka Covid 19
Farmaajo oo waqtiga kala guurka ee doorashadii 2016 ka hadley muxuu yiri